Fahafatesana mpanakanto :: Nomem-boninahitra i Dadah (Mahaleo) tetsy Mahamasina • AoRaha
Fahafatesana mpanakanto Nomem-boninahitra i Dadah (Mahaleo) tetsy Mahamasina
Rodon-kirana mpanakanto maro narahina feon-gitara no nitsena ny fahatongavan’ny tranovorona nitondra ny nofo mangatsiakan’i Dadah (tarika Mahaleo) niroso tao amin’ny Lapan’ny Kolontsaina Mahamasina, omaly tolakandro tamin’ny 4 ora.
Tomany, alahelo, sentosento, tehaka, hirahira… no nanjaka teny an-toerana. Betsaka no latsa-dranomaso rehefa nolanjaina hiditra ny lapa ny vata misy razana. Anisan’ny tsy nahatana ny alahelony ireo mpanakanto sasany ka latsa-dranomaso, toa an’i Inah, Lôla…
Mpanakanto marobe notarihin-dry Ndriana Ramamonjy, Tonton Pà sy Luk, Haja Telofangady, no isan’ny tonga nanome voninahitra an’i Dadah. Nisy kalo nifandimbiasan’ireo artista ka tena nampihetsi-po indrindra ny iray efitrano ny niangalian-dry Lilie sy Farakely an’ilay hira “Ny fanahiko”, sanganasan’i Ndriana Ramamonjy. Tehaka sy hoby no setrin’izany avy amin’ny fianakaviana sy mpankafy ary ny mpanatrika.
Mbola mamoaka feo
Nisesy ny famangiana nataon’ireo mpanakanto, narahin’ireo olon-tsotra, taorian’izay. Nitohy tamin’ny fiaretan-tory an-kira ny fotoana tamin’ny alina manontolo. Samy naneho alahelo an’i Dadah avokoa na Bekoto, Dama, Charles, hany sisa tavela ao amin’ny tarika Mahaleo. “Ny fitiavana no nampiray anay fito mirahalahy. Toy ny gitara ny tarika Mahaleo. Tadin-gitara efatra izay no lasa, telo sisa tavela. Azo heverina ny mety hanohizanay telo mirahalahy satria mbola mamoaka feo izany”, hoy i Bekoto.
“Toy ny tantely ny fahafatesan’izy efatra mirahalahy. Maty namela mamy ho an’ny zavakanto sy ny firenena”, hoy indray ny tenin’i Dama.
Hotanterahina anio maraina amin’ny 8 ora ny fanolorana ny mari-pankasitrahana an’i Dadah. Avy eo, hoentina etsy amin’ny fiangonana Fjkm Katedraly Analakely ny nofo mangatsiakany mialoha ny hanitrihana azy any Betafo Antsirabe.
Torolalana ho an’ny ankizy